Ihe mgbochi: 10 Ngwaọrụ ntinye data iji malite iji taa
Ichapu mkpokọta weebụ bụ usoro mgbagwoju anya nke ụdị dị iche iche na nnukwu ụlọ ọrụ achọrọ ichikota mpịakọta data banyere otu isiokwu ma ọ bụ isiokwu. Ịmụta usoro usoro ihe ntanetị weebụ na-esi nnọọ ike ka a na-ewepụta data site na saịtị dị iche iche na ntinye nchọgharị, usoro omenala, ederede HTTP na ederede.
N'ebe a, anyị enyela ndepụta nke top 10 ngwa ngwa ntanetị nke weebụ n'ịntanetị.
1. Nchapu (nchịkọta Chrome):
Ọkpụcha kacha mma mara maka nkà na ụzụ ya ma dị mma ma onye mmemme na onye na-abụghị onye mmemme. Ngwaọrụ a nwere dataset nke ya ma mee ka ọ dịrị gị mfe ịnweta ibe weebụ ma wepụ ha CSV. Ọtụtụ narị puku weebụ nwere ike ịmepụghị ngwa ngwa na ngwá ọrụ a, ọ dịghịkwa mkpa ide ederede ọ bụla, wuo 1000 API ma rụọ ọrụ ndị ọzọ dị mgbagwoju anya ka Import.io ga-eme ihe niile maka gị. Ngwá ọrụ a dị mma maka Mac OS X, Linux, na Windows ma nyere aka ibudata ma wepụ data na mekọrịta faịlụ na netwọk.
Web-Harvest na-enye anyị ọtụtụ nzacha data. Ọ na-enye aka ichikota na ibudata ibu nke data na ọ bụ onye nchịkọta ihe nchọgharị. Nke a ga-ewepụta data oge, ị nwere ike mbupụ ya dị ka JSON, CSV ma ọ bụ chekwaa na Google Drive na Box.net.
Usoro ọgwụ bụ ihe ọzọ na-eme nchọgharị nke na-enye ohere dị mfe iji ahazi ma hazie data na data dị adị na usoro ntanetị data. Usoro a nwere ike ịdọrọ nnukwu data site na isi mmalite dị iche iche n'otu APIL ma zọpụta ya na ụdịdị dịka RSS, JSON, na XML.
FMiner bụ usoro ihe igwe ojii nke na-enyere aka wepụ data n'enweghị ihe ọ bụla..Ọ ga-eji proxy rotator mara dị ka Crawler nke na-agafe ihe nchekwa bot na crawler site na bot kpuchie weebụsaịtị. FMiner nwere ike ịmegharị weebụsaịtị niile ka ọ bụrụ ihe a haziri ahazi, ya ga-eburu gị $ 25 kwa ọnwa na crawlers dị iche iche anọ.
Outwit bụ ngwá ọrụ nchịkọta weebụ nke a ma ama nke na-enyere aka wepụ data sitere na saịtị dị iche iche, ma a na-emepụta ya na oge. Nke a ga-ebupụ data gị n'ụdị dị iche iche dịka XML, JSON, CSV, na SQL.
6. Toolbar Data:
Toolbar Data bụ Firefox gbakwunyere na-eme ka nchọpụta weebụ anyị dị mfe na njirimara ihe ntinye data ya. Ngwaọrụ a ga-elegharị anya na ibe ya ma wepụ ha n'ụdị dịgasị iche maka ojiji gị.
Irobotsoft maara maka njedebe njedebe data ya ma mee ka nlezianya gị n'ịntanetị dị mfe. Nke a ga-ebubata data ị nwetara na ederede Google. Irobotsoft bụ n'ezie a freeware nke nwere ike irite ma beginners na ọkachamara programmers. Ọ bụrụ na ịchọrọ idetuo na mado data na clipboard, ị ga-eji ngwá ọrụ a.
Ọ bụ ngwá ọrụ ntanetị siri ike ma dị mfe. Ọ nwere ike ịchọpụta nke ọma ihe data bara uru nye gị na azụmahịa gị na nke na-abaghị uru. Ọ na-enye aka wepụ ma budata nnukwu ọnụọgụ data ma dị mma maka saịtị dị ka PayPal.
9. Web Web Scraper:
Site na Google Web Scraper, ọ ga-ekwe omume ịchọta data niile sitere na ebe nrụọrụ weebụ mgbasa ozi, blogs onwe, na ihe ndekọ ozi. Ị nwere ike ịche ha na usoro JSON. E wezụga nbudata ya mgbe nile, ngwá ọrụ a na-enye nchedo spam dị mma ma na-ewepu malware na spam niile site na igwe gị mgbe niile.